Sehatra hoan'i fambolena :: Raikitra ny fetin'ny zaridaina andiany faharoa • AoRaha
Sehatra hoan’i fambolena Raikitra ny fetin’ny zaridaina andiany faharoa
Tahala ifaneraseran’ireo mpitia voninkazo. Fantatra fa hotanterahina etsy amin’ny Alliance française (AFT) Andavamamba, amin’ny 29 – 31 oktobra 2020, ny andiany faharoa amin’ny fetin’ny zaridaina. Miantso an’ireo mpisehatra sy mpitia ny tontolon’ny zaridaina handray anjara amin’ny hetsika ny mpikarakara.
Maro ny fampirantiana sy ny fampisehoana miompana amin’ny voninkazo sy ny fanaovana zaridaina, saingy miavaka ity karakarain’iny AFT ity. Ho tazana mandritra io hetsika io avokoa ny fomba sy endrika samihafa hahafahana manome lanja ny hakanton’ny fambolena voninkazo sy ireo hazo fihinam-boa na ireo hazo manana hanitra fampiasa an-dakozia ihany koa. Misokatra amin’ny karazam-pomba fambolena, manaraka ny filàn’ny fiovana misy amin’izao fotoana izao, maneran-tany, ny sehatra.
Heverina fa vitsy mpahalala, saingy ho hitan’ny rehetra, mandritra ny fetin’ny zaridaina ireo mpisehatra isan-tsokajiny eo amin’ity tontolo ity, toy ny manam-pahaizana amin’ny fikarakarana voninkazo, ireo mpamokatra zana-boninkazo, ireo mpanamboatra sy ny mpaninjara fitaovana samihafa ilaina amin’ny fikarakarana zaridaina.
Hisy ny sehatra hanasongadinana ny hoe « permaculture » na ny fambolena maharitra sy ifampiankinan’ny zava-manan’aina ao amin’ilay toerana. Hanampy izany ny atrikasa fiofanana sy ny fifanakalozan-kevitra.
Fiverenan’ny fitateram-bahoaka :: Am-polony ireo taksibe tsy nanaraka ny fepetra